Oppo Reno 4 iyo Reno 4 Pro, ayaa shaaca ka qaaday qeexitaankooda farsamo | Androidsis
Telefoonka sameeyaha Oppo waxay cusbooneysiin doontaa khadkeeda Reno "ugu dhakhsaha badan" iyada oo ugu yaraan laba qalab oo cusub. Kuwaas ayaa magacooda loo bixin doonaa Reno 4 iyo Reno 4 Pro, kiiskan dhaxal-sugiyaasha Oppo Reno 3 iyo Oppo Reno 3 Pro, taleefannada casriga ah ee iibka wanaagsan haystay tan iyo markii ay suuqa ka bilaabeen.
Labada moodelba waxay soo mareen TENAA, taas oo u oggolaanaysa in wax walba si faahfaahsan loo ogaado oo lagu faani doono inay yihiin calamada cusub ee shirkada sanadkaan 2020. Soo bandhigida labaduba waxay noqon doontaa 5-ta Juun wax badana waa laga filayaa iyaga, maaddaama Shiinaha ay ku guuleysteen inay ka adkaadaan iibinta xitaa tartankooda tooska ah.
1 Reno 4 iyo Reno 4 Pro Sooc
2 Helitaanka iyo qiimaha suurtagalka ah
Reno 4 iyo Reno 4 Pro Sooc
ka Oppo Reno 4 iyo Oppo Reno 4 Pro Waxay yeelan doonaan shaashad leh curvature double, marka hore waxay noqon doontaa 6,43 inji iyo tan labaad 6,55 inji oo leh cabir cabir ah 60 iyo 90 Hz siday u kala horreeyaan. Labada guddi waxay noqon doonaan Full HD + oo xalkooda lagu qiyaaso 2.400 x 1.080 pixels halka Reno 4 ay guddi ka tahay muraayadda 2.5D.
Labada sharad ee Snapdragon 765G chipset taas oo bixin doonta isku xirnaanta 5G, 4.000 mAh baytariga oo leh 65W lacag deg deg ah, 8/128 GB xasuusta labadaba, laakiin Pro sidoo kale wuxuu yeelan doonaa qaab kale oo macquul ah 12/256 GB. Faahfaahinta sida sawirka faraha, oo ku imaan kara shaashadda, ayaa weli ah in la ogaado.
El Oppo Reno 4 wuxuu lahaan lahaa kamarad hore oo labalaab ah, ugu weyn 32 MP oo taageeraya a 2 MP sensor, Oppo Reno 4 Pro wuxuu kaliya kordhin doonaa mid ka mid ah 32 MP. Labada gadaal waxay ku dhejinayaan muraayad weyn oo 48 MP ah oo leh farqiga OIS ee Pro, Reno 4 Pro wuxuu la imaan doonaa labo lenses 12 iyo 13, halka Reno 4 uu yeelan doono laba qaybood oo sare oo ah 8 iyo 2 MP.
Helitaanka iyo qiimaha suurtagalka ah
Oppo waxay soo bandhigi doontaa Reno 4 cusub iyo Reno 4 Pro dhowr maalmood gudahood, gaar ahaan 5-ta Juun. Qiimuhu wuxuu ka bilaabmi lahaa qiyaastii 3.000 yuan, oo u dhiganta qiyaastii 377 euro si loogu beddelo qaabka ugu horreeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Oppo Reno 4 iyo Reno 4 Pro, ayaa shaaca ka qaaday qeexitaankooda farsamo
Samsung Exynos 850: Qalab cusub oo 4G ah oo loogu talagalay bartamaha
Miyuu wallpaper-kani awood u leeyahay inuu xannibo telefoonkaaga Samsung?